Iindaba - Tower Crane Light
1, Isishwankathelo seMveliso
Izibane ze-Tower crane zibhekiselele kwiindawo zokukhanyisa ezinkulu zokwakha ezifana neendawo zokwakha, iidokhi kunye namazibuko, ezinokukhanyisa iindawo ezinkulu kunye nemigama emide. Izibane eziphezulu ze-crane tower, ukukhanya kwexesha elide kunciphisa kakhulu ukonga amandla kunye nokonga amandla. Izibane.Ubushushu bombala bomgama we-irradiation bohlukile kwizihlandlo ezahlukeneyo zokusetyenziswa.
Ukukhanya kwe-LED ye-LED kusebenzisa umgangatho ophezulu we-ultra-bright semiconductor ukukhanya-emitting diode njengomthombo wokukhanya. Imbonakalo yayo intle kwaye iphezulu. Isebenzisa i-aluminiyam ekumgangatho ophezulu wokuqhuba ubushushu kunye nokutshatyalaliswa kobushushu. Lumgangatho ophezulu wokukhanya ohambelana nokusingqongileyo.
2, Iinkcukacha zeMveliso
3, Iimpawu zeMveliso
Intelligent IC drive: Uyilo lweqokobhe lesinyithi, lukhuselekile kwaye luthembekile, umgangatho ophezulu wokungangeni manzi
I-angle ehlengahlengiswayo ye-bracket: i-180 degrees i-angle adjustable, ifanelekile ngokwahlukileyo.
I-chip ye-3030 ephezulu ekhanyayo: Ukusebenzisa i-chip ye-3030, ukukhanya okuphezulu, ixesha elide lokuphila
Isibiyeli esinokulungiswa: Uhlobo lwe-H lwesiseko esisisigxina, i-nut yentsimbi eguquguqukayo, inokulungelelaniswa ukusuka kwii-angles ezininzi, ukuhlangabezana neemfuno zendalo eyahlukeneyo.
Isigqubuthelo seglasi eyomeleziweyo: Ukusebenzisa isigqubuthelo seglasi epholileyo ekumgangatho ophezulu, i-coefficient-proof-proof coefficient, ukukhanya okufanayo, ukuhanjiswa kokukhanya okusebenzayo
Irediyetha yohlobo lweFin: Ukusebenza ngcono kokutshabalalisa ubushushu, qinisekisa ubushushu obusebenzayo bechip, ukuphucula ubomi benkonzo yesibane.
4, Isicelo seMveliso
Izibane ze-Tower crane zisetyenziswa ngokubanzi kwiindawo zokwakha, ii-cranes ze-tower, ukwakhiwa kweendlela, ukwakhiwa kwebhulorho, njl.